Ukuphupha i-Egypt ▷ ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
I-Egypt, njengelizwe lamaharahara kunye neephiramidi, ibibambe umdla omkhulu ebantwini iminyaka emininzi, eqhubekayo unanamhla. Izakhiwo ezinomtsalane ezifana ne-obelisk kunye ne-Sphinx, i-Cleopatra entle, i-Nefertiti entle ngokulinganayo, ubugcisa nenkcubeko ephucukileyo, kunye namasiko kunye namasiko angaqondakaliyo, ahlala enomtsalane, kodwa ayimimangaliso. Nabani na obona i-scarab okanye i-mummy kwi-sarcophagus mhlawumbi ucinga kwangoko ngomhlaba wakudala.
Ukuba iphupha lenzeka eYiphutha okanye i-Egypt ibonakala njengomfanekiso wephupha, kuhlala kukho into engaziwayo kwaye engaqhelekanga ngayo. Iphupha lixhwilwe kwilizwe elibonakala lahlukile kwaye lingaqhelekanga.
1 Isimboli yamaphupha «iJiphutha»: eyona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Uthixo wase-Egypt ubonakala ephupheni lam
2 Uphawu lwephupha «iJiphutha» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «iJiphutha» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «iJiphutha» - ukutolika kokomoya
Isimboli yamaphupha «iJiphutha»: eyona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Uthixo wase-Egypt ubonakala ephupheni lam
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha kutolika iphupha lothixo wase-Egypt njengomnqweno wamaphupha ngengcebiso kunye noncedo. Amava ephupha lothixo wemvelaphi yase-Egypt angabhekisa kwiimvakalelo zetyala lomphuphi. Olu toliko lusebenza ikakhulu xa uthixo wamaphupha ebhengeza isohlwayo okanye esiqhelisela emntwini.
Nabani na okhonza isithixo sase-Egypt ephupheni lakhe unemizuzu eyonwabileyo kunye nempumelelo phambi kwakhe ebomini bokuvuka. Ukuba wenza idini kuThixo xa ulele, unokulindela abahlobo abalungileyo.
Uphawu lwephupha «iJiphutha» - ukutolikwa ngokubanzi
Nanamhlanje kuninzi onokukufumanisa eYiputa. Umhlaba woofaro awukatyhileli zonke iimfihlo zawo, kuba uninzi lwezakhono kunye nobugcisa base-Egypt yakudala buhlala buyimfihlakalo. Izakhiwo ezinomdla kunye nobutyebi obufihliweyo bunika umbono wezinto ezenzeka apho kumawaka eminyaka eyadlulayo.
ICairo, isixeko esikhulu esidlamkileyo kunye nekomkhulu lase-Egypt, itsala izigidi zeendwendwe ezivela kwiindawo ngeendawo el mundo qho ngonyaka. Isixeko sidibanisa esidala nesala maxesha. Isimboli yamaphupha "iYiputa" kufuneka iqondwe ngendlela efanayo: ukuphupha ukuphonononga kwiphupha lakho Ayaziwa y Ubunzima, Ukuchasana nokuphikisana.
Isakhiwo ngqo sephupha lase-Egypt sinika inkcazo yokuchazwa ngokuthe ngqo kophando ngokophando lwangoku lwephupha. Ephupheni, oothixo base-Egypt, oofaro okanye izinto ezinje ngesidumbu zinokubonakala. Kuba inkolo yoothixo, iintsomi kunye nomlingo zidlale indima ebalulekileyo kwi-Egypt yakudala, kufuneka zigcinwe ngokuchanekileyo emaphupheni xa zivela apho.
Ukuba ne-obelisk, izithethe zomlingo, kunye nolwazi lwakudala ephupheni zidlala indima ebalulekileyo, ke oku kunokuba ngumqondiso wokuba iphupha likhona. Uncedo olungaphaya kwendalo unethemba lokusombulula iingxaki kubomi bakhe bokuvuka. Ikhubalo elidala, njengoko mhlawumbi linxitywa ngukumkani wase-Egypt, lifanekisela isigqibo esiza kuba neziphumo ezibi.
Nabani na oqaphela inkuba-bulongo, ibhungane, kwilizwe lamaphupha kungenzeka ukuba mnye Ixhoba. Oku kuthetha ukuba umntu ophuphayo angafumana nangoko ngeendlela ezincinci.
Rhoqo iphupha, xa uphawu lwephupha «iJiphutha» okanye iphiramidi ibonakala, ijongene nayo ukufa. Inkolo yabafi yayiyinto ebalulekileyo kwaye ibanzi kubomi benkolo kwi-Egypt yamandulo.
Ke ngoko, oku kunokutolikwa njengophawu lokuba iphupha likumhlaba ovukayo kunye Tod izivumelwano, ezingafuneki ukuba zibe mbi. Ukufa kukwahlala kusisiqalo esitsha; Ukutolikwa kwamaphupha, oku kuthetha isigaba esitsha sobomi.
Uphawu lwephupha «iJiphutha» - ukutolikwa kwengqondo
Ukuba umntu utolika uphawu lwephupha "i-Egypt" ngokwasemphefumlweni, kukho into ebonakalisa indawo eyimfihlakalo, mhlawumbi emnyama kunye nomlingo wephupha. ubuntu yokuphupha.
Ngokuvela kwesi simboli sephupha, unxibelelwano lwamaphupha uba koku icala elimnyama wesiqu sakho. Mhlawumbi eli cala lephupha livela kwangoko lenyuka okanye uzama ukuphanda eli cala lobuntu bakho.
Ezi inokuba zizizathu zokuba iphinde ibonakale ngakumbi nangakumbi emaphupheni kwaye ivele njengomxholo. I-Egypt ibonelela ngesimo esifanelekileyo sokujonga icala lakho elimnyama njengephupha.
Uphawu lwephupha «iJiphutha» - ukutolika kokomoya
Ngokwentetho yokomoya, uphawu lwephupha "i-Egypt" luphawu lwecala elingaziwayo lomntu kwaye ngokubanzi lifanekisela yonke into. Ndiyamangalisa.